फिल्मी समाचार Archives - नेपाली समाचार
Category: फिल्मी समाचार
फिल्मी समाचार रोचक समाचार समाचार
अन्तत: डुब्यो रेखाको जहाज, न फिल्म न राजनीति !
Written by:AnonymousPosted on: December 25, 2017
काठमाडौं । कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालमा प्रवेश गर्दा हिरोइन रेखा थापाले भनेकी थिइन मेरो अन्तिम पार्टी यही हो । तर ६ महिना बित्न नपाउँदै पशुपतिशमशेर राणाको राप्रपा प्रजातान्त्रिक तिर लागिन राणाको चुनाव प्रचारमा खुब खटिन् । तर, न राणाले जिते न राप्रपा प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय पार्टी भयो । यो राजनीतिक पीडा यस्तो बेला आइलाग्यो जतिबेला उनी निर्मित तथा अभिनीति रुद्रप्रिया फ्लप भएको घाउ आलै थियो । फिल्मको व्यापार मात्र होइन, समीक्षात्मक प्रतिक्रियामा पनि नाजुक रह्यो…
"अन्तत: डुब्यो रेखाको जहाज, न फिल्म न राजनीति !"
अनौठो फिल्मी समाचार समाचार
कसले पार्यो प्रियंका र आयुष्मानको यस्तो अवस्था ?
पछिल्लो समय चर्चित नायिका प्रियंका कार्की र नायक आयुष्मान देशराज श्रेष्ठ जोशीको चर्चा जहाँतहीँ हुने गरेको छ । उनीहरु प्रायजसो एकअर्कासँग समय बिताउन मन पराउने गर्छन् । यस्तैमा अचेल त उनीहरु दुवैलाई लिएर फिल्म तथा म्युजिक भिडियोहरु पनि बनाउन थालिएको छ । पछिल्लो समय उनीहरुले अभिनय गरेका भिडियोहरु युट्युबमा थुप्रै आएका छन् भने चलचित्र ‘छक्का पन्जा २’मा पनि उनीहरु देखिएका थिए । यस्तैमा केहिदिन अघि नायिका प्रियंका कार्कीले आफ्नो इंस्टाग्राममा एउटा अचम्मको फोटो राखेकी थिईन्,…
"कसले पार्यो प्रियंका र आयुष्मानको यस्तो अवस्था ?"
फिल्मी समाचार समाचार
करिब दुई वर्ष पछि युवा स्टार अनमोल केसी मिडिया माझ आए । माघ २६ देखि रिलिज हुन थालेको ‘कृ’ फिल्मका लागि भूमिगत जस्तै बनेका अनमोल शुक्रवार बडि गार्ड सहित पत्रकार सम्मेनमा देखिए । साथमा फिल्मकी मुख्य नायिका अदिति बुढाथोकी पनि थिइन् । नायक तथा निर्माता भुवक केसी, सुवास गिरि र निर्देशक सरेन्द्र पौडेल पनि ‘कृ’ को ट्रेलर रिलिजमा उत्साहित हुँदै सहभागी भए । नाम जस्तै उनी नेपाली फिल्म उद्योगका लागि अनमोल छन् । पछिल्लो पटक…
‘कृ’को ट्रेलर ट्रेन्डिङको नम्बर १ मा, युटुबमा तोडियो सबै रेकर्ड
अब, २४ घन्टामै युटुबमा चलचित्रको ट्रेलर वा गीत यति पटक हेरियो, यति नम्बर ट्रेन्डिङमा पर्न सफल भयो भन्ने खबर पुरानो भएको छ । शुक्रबार बेलुकी ६ बजे सार्वजनिक भएको चलचित्र ‘कृ’को ट्रेलरले युटुबमा नेपाली चलचित्रको ट्रेलरले यसअगाडि बनाएको सबै रेकर्डलाई तोडिदिएको छ । चलचित्रको ट्रेलर सार्वजनिक भएको ६ घन्टामै ट्रेन्डिङको तेश्रो स्थानमा पर्न सफल भएको थियो । त्यसको केहि घन्टामै ट्रेलर नेपाल ट्रेन्डिङको दोश्रो स्थानमा उक्लन सफल भयो । अब, चलचित्रको ट्रेलर सार्वजनिक भएको १९…
"‘कृ’को ट्रेलर ट्रेन्डिङको नम्बर १ मा, युटुबमा तोडियो सबै रेकर्ड"
फिल्मी समाचार मनोरंजन राजनीति समाचार
सुटुक्क ओली निवास छिरेका राजेश हमाल निस्कदा पर्यो फसाद
काठमाडौं । शनिबार फुर्सदको दिन पारेर नायक राजेश हमाल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवासमा पुगे। चुनावबाट पहिलो दल बनेको एमालेका अध्यक्ष ओलीलाई बधाई दिन हमाल निवासमा पुगेका हुन्। हमाल ओली निवास छिर्दा माहोल ठिकै थियो। तर ओलीलाई भेटेर बाहिरिदा ओली निवासको प्राङ्गढमा भिड छिचोल्न हमालका लागि मुस्किल पर्यो। हमाल आएको थाहा पाएर पुग्नेहरू एकातर्फ थिए भने अर्कोतर्फ पत्रकारको पनि उल्लेख्य उपस्थिति थियो। ऋषि धमला नेतृत्वको रिपोर्टर्स क्लबले ओलीसँग भेट-संवाद गर्ने पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम अनुसार त्यहाँ…
"सुटुक्क ओली निवास छिरेका राजेश हमाल निस्कदा पर्यो फसाद"
नायिका रेखाले दिइन् प्रचण्डलाई विजय र जन्मदिनको एकसाथ बधाई
काठमाडौं । चर्चित नायिका रेखा थापाले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”लाई चुनावमा विजय हासिल गरेको र जन्मदिनको एकसाथ बधाई दिएकी छन् । उनले चुनावमा विजयी भएकोमा प्रचण्ड र डा. बाबुराम भट्टराईलाई एकसाथ बधाई दिँदै थप लेखेकी छन्, “…एण्ड ह्याप्पी बर्थ डे प्रचण्ड बा ।” नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जन्मदिन पनि आजै परेको छ । संयोग ! आफू जन्मेकै दिन प्रचण्डको विजयी घोषणा गरिएको छ । २०११ मंसिर २६…
"नायिका रेखाले दिइन् प्रचण्डलाई विजय र जन्मदिनको एकसाथ बधाई"
फिल्मी समाचार मनोरंजन रोचक समाचार समाचार
भर्खरै मात्र नायक निखिल उप्रेतीले फेरी १८ तलाबाट हाम फ्याले…खास केको लागि?(हेर्नुहोस)
नायक निखिल उप्रेतीले चलचित्र ‘पिजडा’बाट आफ्नो करिअरको आरम्भ गरेका थिए । यसपछि, निखिल नेपाली चलचित्रमा सुपरस्टार बने । उनलाई अहिले दर्शकले ‘एक्सन किङ’को रुपमा चिन्छन् । यसैले पनि निखिलले काम गरेका चलचित्रमा दर्शकलाई ‘एक्सन’कै बढी अपेक्षा हुन्छ । <iframe width=”300″ height=”260″ src=”https://www.youtube.com/embed/XumvNdFBy38?ecver=1″ frameborder=”0″ gesture=”media” allow=”encrypted-media” allowfullscreen></iframe> उनै, निखिल फेरि ‘पिजडा ब्याक एगेन’बाट दर्शकमाझ आउने तयारीमा छन् । यो चलचित्र माघ ४ गतेबाट रिलिज हुँदैछ । चलचित्रको २ वटा गीत रिलिजपश्चात ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको छ ।…
"भर्खरै मात्र नायक निखिल उप्रेतीले फेरी १८ तलाबाट हाम फ्याले…खास केको लागि?(हेर्नुहोस)"
महानायक राजेशसँग उनकी आमा, यसरी भएको थियो मृत्यु (फोटोहरु)
Written by:AnonymousPosted on: December 11, 2017
महानायक राजेश हमालले आफ्नी ममतामयी माता रेणु केसी हमाललाई सम्झिएका छन् । केहि समयअघि आमासँगका तस्विरहरु सामाजिक संजालमा अपलोड गर्दै महानायक हमालले आमालाई सम्झिएका हुन् । सामाजिक संजालमा उनले आफ्नो आमासँगको चारवटा फोटोहरु अपलोड गरेका छन् । फोटो अपलोड गर्दै महानायक हमाल लेख्छन्, ‘आमालाई सम्झिदैँ….चलचित्र गर्नु अगाडी आमा सँग’ । केहि समय अगाडी राजधानीको सोल्टी होटलमा आयोजित कार्यक्रममा पनि नायक हमालले आफ्नी आमालाई सम्झिएका थिए । कार्यक्रममा हमालले आमाको मृत्युको कारणबारे पनि स्पस्ट पारेका थिए…
"महानायक राजेशसँग उनकी आमा, यसरी भएको थियो मृत्यु (फोटोहरु)"
अन्मोल के. सी हल्लै बढी
Written by:AnonymousPosted on: December 11, 2017 December 11, 2017
– नेपाल संवाददाता अभिनेता हुनुको नाताले अनमोल केसीको अभिनयको अधिक चर्चा हुनुपर्ने हो । यथार्थ अलिक भिन्न छ । उनको कामभन्दा उनले लिने दामको धेरै चर्चा चल्छ । जस्तो : कृमा उनको भूमिका कस्तो छ ? वास्तै छैन । जबकि, उनले यस फिल्मबाट सुरुमा २० लाख र सुटिङ लम्बिएपछि थप १० लाख रुपियाँ लिएपछि सिनेवृत्त तात्यो । त्यसपछि कुनै फिल्ममा अनुबन्ध नभएका अनमोल फेरि पारिश्रमिककै कारण आकर्षणको केन्द्रमा छन् । उनलाई ५० लाख रूपियाँसम्मको प्रस्ताव…
"अन्मोल के. सी हल्लै बढी"